Disney's Frozen dia manana alim-panala tsy mampino | Famoronana an-tserasera
Ilay 3D tsy ny fahaizan'ireo animator ihany no ahitana sy ny maodely hamoronana endrika endrika mahavariana na hamoronana sary mihetsika lip izay mamela antsika hino fa ny mpihetsiketsika sarimihetsika mihetsika dia mamolavola ny molony tanteraka, fa misy kosa ireo mpilalao sarimihetsika lehibe hafa manome ny tena marina azo atao amin'ny vokatra sasany.
Ny algorithma dia meloka fa misy vokany ilaina amin'ny fiaramanidina na sehatra sasany, mamokatra ny fahatsapana izany misy oram-panala milatsaka amin'ny tany ka mizara ho faritra maro samihafa araka izay hitranga amin'ny tena izy. Eo no anaovana ny algorithm MPP izay ampiasaina ao amin'ny Frozen, ilay sarimihetsika Disney, mba hanahafana ny vokatry ny karazana singa rehetra izay misy ifandraisany amin'ny lanezy.
Ao ambadik'io fanahafana ny oram-panala io dia misy ny ora sy ny ora fiasana ary ny ezaka hamoronana vokatra tsy ampoizina omeo anay ny tena fahatsapana ny fikororohana ny oram-panala amin'ny zavatra iray. Mety ho vitantsika ny manao azy io amin'ny tanana, izany hoe mamorona sary mihetsika manokana ary mandehana amin'ny endriny tsirairay, saingy noho ny plugins, toy ny an-jatony azon'ny programa toa an'i Maya na 3DStudio Max, dia manangona fotoana ahafahantsika mamoy ora.
Ao amin'ny horonantsary nozarain'i Disney, nohazavaina ilay algorithm nampiasaina hamoronana ny fanahafana ny lanezy ao Frozen. Amin'ity algorithm antsoina hoe PMP ity dia hazavaina izy ireo ny dingana rehetra tafiditra ka farany ny simba ny oram-panala. Avy amin'ny fomba nanaparitahana ireo sombin-javatra tamin'ny zavatra, ny kajy ny hafainganana sy ny faobe, ny habetsaky ny sombintsombiny na ny fiovan'ny toetr'andro amin'ireo sombintsombiny an-jatony izay nizara tamin'ny zavatra lehibe toy ny felam-panala.
Fianarana tena tsara sy asa azo azo ampiasaina toy ny toetra mandeha amin'ny tany feno lanezy na ny fomba ahafahanao mampiasa angady hanadiovana lalana misy lanezy ka ny vokatra dia manakaiky ny zava-misy.
Lahatsary mampiseho ny fomba fanovana soatoavina sasany afaka mahazo lanezy ranon-javatra kokoa ianao na iray hafa mifintina kokoa. Amin'izany fomba izany no ahafahana mampihatra azy ireo araka ny vokany ilaina amin'ny tifitra sarimihetsika mahafinaritra antsoina hoe Frozen.
Loharano tena tsara ho anao izay mianatra 3D na miditra amin'ny tontolon'ny fanaingoana toetra. Raha mitady bebe kokoa momba ny sarimiaina ianao, aza adino i Miyakazi.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny algorithm tokony homena tsiny noho ny fanahafana ny lanezy mahatsikaiky hita ao amin'ny Disney's Frozen